ishidi le-CNC yokusika ishidi elenziwe ngokwezifiso China Manufacturer
Incazelo:Ngokwekhabhoni yokusika eyenziwe ngokwezifiso,Ukusika Amapuleti Ekhabhoni,Ishidi le-Fibre le-CNC
Home > Imikhiqizo > Ukuzisika kwe-Carbon Fibre > ishidi le-CNC yokusika ishidi elenziwe ngokwezifiso
Lokhu ukusika kweCarbon Fibre CNC , I-3K Woven Carbon fiber Sheet ye-Multi-rotors ithandwa kakhulu ezintweni zokwenziwa nge-carbon fiber. Kokubili ukwakhiwa kwe-0/90 degree kanye ne-0/45 / -45 / 90 (Quasi-isotropic) kuyatholakala. Ngenxa yesisindo esikhanyayo, i- 3K Woven Carbon Glass Sheet yama-rotors amaningi idumile kakhulu ku-drone, UVA, emakethe ye-FPV, futhi inohlelo lokusebenza olwengeziwe manje.
Indwangu: Amashidi we-carbon Fibre
Ubukhulu: 400x500 / 500x600mm
Ngaphandle kwe- Carbon Glass Sheet , ishidi le-carbon fiber eligcwele , i- G10 G lass Fibeta Ishidi konke ku sotck.
Uma kukhona okuthakazelisa ku-pls zizwe ukhululekile sazise.
Ukusikwa kwensiza yokusikwa kweCnc kwamashidi we-Carbon Xhumana Nanje
Ishidi eliphezulu elinemibala egcwele i-carbon fiber / sheet ye-kevlar Xhumana Nanje
Ngokwekhabhoni yokusika eyenziwe ngokwezifiso Ukusika Amapuleti Ekhabhoni Ishidi le-Fibre le-CNC Ifreyimu yokusika eyenziwe ngokwezifiso Izakhi Zekhabhoni ezenziwe ngokwezifiso Ngokwezifiso Ingalo ye-3k yeKhabhoni ye-3k eyenziwe ngokwezifiso Ibhodi ye-G10 eyenziwe ngokwezifiso Ikhibhodi ye-Carbon Fibre eyenziwe ngokwezifiso